October 16, 2021 - Online Hartha
ည ၁၁နာရီလောက်မှာ ဖုန်းဒိုင်းဆိုတဲ့ အသံအကျယ်ကြီး ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာ…
October 16, 2021 by Online Hartha
ည ၁၁နာရီလောက်မှာ ဖုန်းဒိုင်းဆိုတဲ့ အသံအကျယ်ကြီး ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်ပိုင် ရှင်ဖြစ်တဲ့ Naung Naung Kyaw ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင် ရှင်မှ ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို လူတို င်း သိရှိပြီး သတိထားမိစေဖို့ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်…. အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကို အားလုံးသိစေဖို့ အားလုံးသတိထားကြမိစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေးပေး လို က်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ည ၁၁ နာရီ ၄ မိနစ် ကျွန်တော် တို့ အိပ်ခန်းထဲ က Air Con စဖွင့် ပြီး ၁ မိနစ်လောက် အကြာ မှာ ဖုန်း ဒိုင်း ဆိုတဲ့ အသံ အ ကျယ်ကြီး … Read more
သနပ်ခါးကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မှိုမတက်အောင်လုပ်နည်း
သနပ်ခါးကို တနှစ်ပတ်လုံး မှိုမတက်အောင်လုပ်နည်း သနပ်ခါးချစ်သူ အမျိုးတို့ရေ…. ဒီနေ့ နေလဲသာသမို့ ဗဟုသုတ လေးတခုလုပ်ရအောင်လား သနပ်ခါးတွေလိမ်းမကုန်ခင် ဒီတိုင်းထားမယ့်အစား ရေ ဗွှမ်းဗွမ်းဆူတဲ့အထဲ ထည့်ပြုတ်ပြီး ခဏအကြာ ပြန်ဆယ်ရေအေးနဲ့စိမ်ပြီးပဒပ်အနုလေးနဲ့ တိုက်ဆေးရေစစ်နေလှမ်းထားလိုက်ပါ။ နေပူနဲ့ခြောက်အောင်လှမ်းနော်။သနပ်ခါးနံ့လေး မယုံနိုင်အောင်မွှေးနေတာတွေ့ရမှာပါ။ မှိုလည်း မတက်တော့ဘူးနော် တနှစ်ပတ်လုံးထားထား ရပြီနော်။ ” ဒီနေ့ လုပ်ဖြစ်တဲ့ ဗဟုသုတလေး အမျိုးတွေကိုမျှဝေပါတယ်နော် “ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်….. စာဖတ်သူအပေါင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီး သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရင် (Share)မျှဝေပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အန်တီစိန် Unicode Version သနပျခါးကို တနှဈပတျလုံး မှိုမတကျအောငျလုပျနညျး သနပျခါးခဈြသူ အမြိုးတို့ရေ…. ဒီနေ့ နလေဲသာသမို့ ဗဟုသုတ လေးတခုလုပျရအောငျလား သနပျခါးတှလေိမျးမကုနျခငျ ဒီတိုငျးထားမယျ့အစား ရေ ဗှမျးဗှမျးဆူတဲ့အထဲ ထညျ့ပွုတျပွီး ခဏအကွာ ပွနျဆယျရအေေးနဲ့စိမျပွီးပဒပျအနုလေးနဲ့ တိုကျဆေးရစေဈနလှေမျးထားလိုကျပါ။ … Read more
ည ၁၁နာရီလောက်မှာ ဖုန်းဒိုင်းဆိုတဲ့ အသံအကျယ်ကြီး ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာ
ည ၁၁နာရီလောက်မှာ ဖုန်းဒိုင်းဆိုတဲ့ အသံအကျယ်ကြီး ကြားပြီးတဲ့နောက် ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်ပိုင် ရှင်ဖြစ်တဲ့ Naung Naung Kyaw ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင် ရှင်မှ ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို လူတို င်း သိရှိပြီး သတိထားမိစေဖို့ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်…. အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကို အားလုံးသိစေဖို့ အားလုံးသတိထားကြမိစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေးပေး လို က်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ည ၁၁ နာရီ ၄ မိနစ် ကျွန်တော် တို့ အိပ်ခန်းထဲ က Air Con စဖွင့် ပြီး ၁ မိနစ်လောက် အကြာ မှာ ဖုန်း ဒိုင်း ဆိုတဲ့ အသံ အ ကျယ်ကြီး … Read more
ကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်း လူကြီးတွေသတိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်
ကလေးရှိတဲ့ အိမ်တိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက် ကလေးတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိဘတွေ သတိထားရမယ့် ကိစ္စတွေက အများပြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၃ နှစ် ၊ ၄ နှစ် အရွယ် ကလေးတွေကို မတော်တဆ အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် စောင့်ကြည့်ရတာ တကယ်ကို မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီလို အရွယ်ကလေးတွေဟာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဆော့တတ်လွန်းတော့ တစ်ယောက်ထည်း လွတ်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေး ဟာ တစ်ယောက်ထဲ တကုတ်ကုတ် ဆော့နေရင် ကွယ်ရာမှာ ပစ်မထားပါနဲ့။ အခုပြောပြမယ့် ကလေးငယ်လေးကတော့ မိဘတွေ မသိတဲ့အချိန်မှာ အားသွင်းတဲ့ ပလပ်ပေါက်ထဲကို ဇွန်း ထိုးထည့်မိလို့ လျှပ်စပ်ဓာတ်ကူးပြီး ဓာတ်လိုက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဟာ အရမ်းကို ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။ … Read more
တရုတ်တွေ ဈေးရောင်းရင် ဘာလို့အောင်မြင်တယ်ထင်လဲ…ဗျူဟာရှိပါတယ်
၁ ။ ဆိုင်နေရာကောင်းခြင်းဟာ ဆိုင်ကြီးတာ ငယ်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ၂ ။ ရောင်းကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ဆိုင်နေရာထက် ပိုအရေးကြီးနေတတ်ပြန်တယ် ။ ၃ ။ စကားချိုချိုသာသာ ဈေးရောင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောက်သည်ကို ပိုမြဲစေပါတယ် ။ ၄ ။ အရင်းအနှီး နည်းတာကို စိုးရိမ်ခြင်းထက်၊ ယုံကြည်မှု နည်းတာကို ပိုစိုးရိမ်သင့်ပါတယ် ။ ၅ ။ ဆိုင်ကို လှလှပပ ခင်းကျင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပေမဲ့ နည်းနည်း ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆိုင်ငယ်ကလေးက ပိုရောင်းကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ဈေးချိုတယ်ဆိုတာကို ဝယ်ယူသူများက ထင်မြင်သွားစေလို့ပါ ။ ၆ ။ ဝယ်သူကို တောက်လျှောက်လိုက်ကပ်နေတာမျိုး၊ မဝယ်မချင်းတိုက်တွန်းနေတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ ။ ၇ ။ ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်သုံးနိုင်တဲ့ … Read more
US$9.6 billion စညျးစိမျကိုစှနျ့ကာ သာသနာမှာ အပွီးပိုငျဝငျရောကျသှားတဲ့ ဆရာတျောအရှငျသူမွတျတဈပါးအကွောငျး
US$9.6 billion စည်းစိမ်ကိုစွန့်ကာ သာသနာမှာ အပြီးပိုင် ဝင်ရောက်သွားတဲ့ ဆရာတော်ရှင်သီရိပုညော တစ်ချိန်က ရွှေဘုံပေါ်မှာအသပြာထုတ်ကို ခေါင်းအုံးလုပ် ဒေါ်လာကို မွေးရာလိပ်ပြီး အိပ်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊မရှိဆိုတဲ့ စကားကို မကြားဖူးအောင်ထိ ပြည့်စုံတဲ့ သူဌေးသား ၊ သူဌေးသမီးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ လက်ညှိုးထိုး ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊ ဟင်းခွက် တစ်ရာနဲ့စားခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ အကောင်းဆုံး စားဖိုမှူး တွေရဲ့ လက်ရာတွေကို တစ်နေ့တစ်ခြား မရိုးရအောင် စားခဲ့တဲ့သူဌေးသား။ အော်.. ခုတော့ ရွာအသီးသီး လမ်းအသွယ်သွယ်မှာ ရပ်ဆွမ်းခံကြွပြီး ရလာတဲ့ဆွမ်းကြမ်း ဆင်းရဲ ချမ်းသာမဟူ သဒ္ဓါဆွမ်းတွေဆိုတော့ အေးအေး ပူပူ ဆွမ်းအလှူရှင်တွေကို မေတ္တာပို့ ဓမ္မကိုနှလုံးပြုပြီး ဆွမ်းဘုန်းနေရတဲ့ အချိန်တွေ ၊တောနက်ထဲက ဓနိထန်းရွက် ကာထားတဲ့ … Read more
မဟာမွတျမုနိရုပျရှငျတျောဘုရားပရဝုဏျ၌ ပွုပွငျရေးလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျနစေဉျ တှရှေိ့ခဲ့ရသော ထူးဆနျးရှေးကတြဲ့ ရှေးဟောငျးရုပျထုအကွောငျး
မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်ဘုရားပရဝုဏ်၌ ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေစဉ် ရခိုင့်ဘုရင် စန္ဒသူရိယမင်းဟုယူဆရသော ရှေးဟောင်းရုပ်ထုတခု တူးဖော်တွ့ရှိခဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင် တော်ဘုရားပရဝုဏ်မှာ ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် မြေတ.ူးနေ စဉ် ညနေ ၄နာရီခန့်က ရှေးဟောင်း နတ်ရုပ်ထုကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရာဟန်အမူအရ ဓညဝတီခေတ် AD ၁ရာစုဝန်းကျင်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၀၀နီးပါးပါ။ ဒါ့အပြင်ရခိုင်ဘုရင်စန္ဒသူရိယမင်း ရုပ်ထုလို့ လည်း ခန့် မှန် ပြောကြပြန်ပါတယ်။ မဟာမုနိပရဝုဏ်ဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ အဓိက အထွဠ်အမြတ်ထားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မဟာမုနိဘုရားပုရဝုဏ်အတွင်းရှိ မြောက်ဖက်ဆင်းလမ်းစောင်းတန်း အရှေ့ဖက် တွင် အဆိုပါရုပ်ထု၏ ဦးခေါင်းအနည်းငယ်ပေါ်နေရာကို အလုပ်သမားတစ်ချို့တွေ့စဉ် တူးဖော်ကြည့်ရာမှ ယခုကဲ့သို့ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း မဟာမြတ်မုနိဂေါပကအဖွဲ့မှဥက္ကဌဦးသာလှအောင်ကပြောပါတယ်။ လက်ရှိပြုပြင်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေက“ရုပ်ထုက မြေပေါ်မှာအနည်းငယ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့လို့ ဆက်ပြီးတူးလိုက်တဲ့အခါ ပေါ်လာတာပါ။ … Read more
အသက် ၈၅နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရသောအခါ
အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရသောအခါ ထိုင်နေတုန်း အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကို အံသြသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့အခါမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားဖို့ တော်တော်လေးကို ခက်ခဲပါတယ်။စားရေးသောက်ရေး နေရေးထိုင်ရေးအတွက် တစ်ကိုယ် တည်း ရှာဖွေဖို့ဆိုတာ ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ယခုလို ခက်ခဲတဲ့ကြားက အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် အဖွားအိုတစ်ယောက်က ကားငှားခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ ယခုကဲ့သို့ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်ဆည် Alpha ဘိလပ်မြေစက်ရုံရှေ့ထိုင်နေတုန်း မန္တလေးဘက်က သနပ်ခါးတုံးရောင်းပြီးပြန်လာတဲ့အသက် ၈၀ ကျော်အဖွားအိုတစ်ယောက် သူ့အိမ်ကိုပြန်ဖို့ ကားကြုံစီးပါရစေ ပိုက်ဆံ ၅၀၀ ပေးပါ့မယ်ဆိုလို့ အိမ်အရောက် လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ ၈၅ နှစ်အရွယ်ထိ … Read more